Banyere Mbupu - Dongguan JinRong Aliminum Products Co., Ltd
Anyị nwere ike ụgbọ mmiri ngwaahịa ọ bụla adreesị ụwa nta. Rịba ama na e nwere ihe mgbochi ụfọdụ na ngwaahịa, na ụfọdụ ngwaahịa enweghị ike Ẹnam ekese ụfọdụ mba ebe.
Mgbe ị na-edebe iwu, anyị ga-eme atụmatụ mbupu na nnyefe ụbọchị maka gị dabeere na nnweta gị ihe na mbupu nhọrọ ị na-ahọrọ. Dabere na mbupu na-eweta ị na-ahọrọ, mbupu ụbọchị atụmatụ nwere ike igosi na mbupu ruturu page.
E nwere ihe abụọ mgbe ị chọrọ ka e kwuru na dị ka ndị a:
1.For na samples mbupu, ndị ahịa nwere ike ịhọrọ mbupu ụzọ. Ọ bụrụ na ị sample bụ ala ibu na obere nke ukwu, ị nwere ike họrọ DHL, gbasie, TNT, China Post wdg Anyị ga-eme ndokwa ka ụgbọ mmiri ndị samples gị ngwa ngwa na nkwa na ị pụrụ inweta iberibe kpamkpam. Mbupu oge ga-4 ~ 10 ụbọchị, na kpọmkwem mbata oge dabeere gị ebe n'ezie.
2.For uka mmepụta mbupu, anyị ga-eji FOB Shezhen Port ka ụgbọ mmiri na akpa na ebe ị na-enye anyị. Ị mkpa ịdị na-akwado anyị dum nke mbupu mezue na mbupu oge ga-20 ~ 28 ụbọchị na kpọmkwem mbata oge dabeere gị ebe n'ezie.
Biko na-ekwukwa na mbupu ọnụego maka ọtụtụ ihe anyị na-ere bụ ibu ibu na-dabeere. The arọ nke ọ bụla dị otú ahụ ihe nwere ike ịchọta na ya zuru ezu na peeji nke.